Ady amin'ny herisetra :: Voatendry ho masoivohon'ny Unfpa i Mialy Rajoelina • AoRaha
Ady amin’ny herisetra Voatendry ho masoivohon’ny Unfpa i Mialy Rajoelina
Nahazo andraikitra. Notendren’ny avy eo anivon’ ny sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misa- hana ny mponina (Unfpa) ho masoivoho miandraikitra ny ady amin’ny herisetra miankina amin’ny saranga eto amintsika ny vadin’ny Filoham-pirenena, Rajoelina Mialy. Nandritra ny fankalazana ny faha-50 taona nijoroan’ny Unfpa, teny amin’ny Carlton Anosy, no nampahafantarana azy tamin’ny fomba ofisialy, tao amin’io toerana io.
Tsy vaovao aminy izao andraikitra izao, satria nambarany taorian’ny fanendrena azy teny an-toerana fa: « efa ela no naharesy lahatra azy amin’ ny tokony hiadiana amin’ ny fanitsakitsahana ny zo fototry ny olombelona, toy ny herisetra miankina amin’ny saranga ».
Fantatra fa ny 30% amin’ny vehivavy malagasy no iharan’ny herisetra. “ Misy fiantraikany mivantana amin’ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ara-piarahamonina, ara-tsosialy sy ara-toekarena izany, ary eo amin’ny fiainan’ny ankizy sy ny fiarahamonina amin’ny ankapobeny mihitsy, eny hatramin’ny Firenena aza”, hoy Rajoelina Mialy, izay sady mpanorina ny fikambanana Fitia.
Ady amin’ny herisetra :: Voatendry ho masoivohon’ny Unfpa i Mialy Rajoelina - ewa.mg dit :
[…] Ady amin’ny herisetra :: Voatendry ho masoivohon’ny Unfpa i Mialy Rajoelina est apparu en premier sur […]
Fifehezana ny morontsiraka :: Tsy ampy ny fiarovana ny sisin-dranomasina